Shiinaha warshad Bacda Jiifka iyo saarayaasha | Senlai
1. Shirkadeena inta badan waxay soo saartaa bacaha jiifka. Meelaha ugu iibinta wanaagsan ee bacaha jiifka waa Yurub iyo Waqooyiga Ameerika.
2. Bacda jiifka waxay qaadataa dharka laastikada ah iyo qaabeynta naqshad jilicsan. Carruurtu si xor ah ayey ugu raaxeysan karaan bacda jiifka. Bacda jiifka waxaa loogu talagalay ilaalin garabka si looga ilaaliyo caruurta qabowga inuu ku dhaco. Naqshad laba jibbaar laba geesood ah, laba dhinac siibeeye si fudud loogu shido loona damiyo. Waxaa jira silsilad dhejis ah oo ku dhegan dhabarka bacda jiifka, taas oo haysa hawo wanaagsan. Lakabka kore waa biyihiisu ayna wayaanuhu iska celin karin, lakabka gudihiisuna waa mid lagu daray, lakabka dhexena waa cudbi. Waa diirimaad mana ka baqeyso qabow dabaysha qabow.
3. Shirkadaheena waxaa ku jira noocyo badan oo jawaano hurdo ah, oo ay ka mid yihiin dhuuban, dhumuc leh, hoos, hoosna u jirin, jiinyeer hal dhinac ah, laba jibaaran laba dhinac, hoos, maro jilicsan, mid aan timo lahayn, midab timo leh, foosto, foosto laba jibbaaran, xiritaanka snap , Xiritaanka Velcro. Qaar ka mid ah boorsooyinka jiifka waxaa lagu dhejin karaa gaariga lagu riixo.
4. Bacda jiifka waxay leedahay meel ballaaran oo waxaa loo isticmaali karaa buste iyo gogol. Markaad dooranayso bacaha jiifka, waxaad ku dooran kartaa hadba sida dhererka ilmahaagu yahay. Dhererka kiishka jiifka waa inuu ka badnaadaa dhererka ilmaha, cabirka kore ee bacda jiifka waa inuu ka weynaadaa cabirka madaxa ilmaha. Haddii cabirku aad u yar yahay, ma jirto meel ay carruurtu ku raraan bacda lagu seexdo. Laakiin isla markaa, cabirku waa inuusan noqon mid aad u ballaaran, bacda hurdada oo aad u weyn wax saameyn ah kuma lahan, ma ciyaari karto doorka dabaysha iyo diirimaadka.
5. Alaabooyinkayagu waxay ku habboon yihiin shahaadada Oeko tex 100 heerka 1. Warshadu waxay si adag gacanta ugu haysaa tayada badeecadaha kala duwan waxayna hubisaa tayada dharka iyadoo loo marayo tolida, dheehida iyo habab kale. Alaabtayadu waxay leeyihiin gacan qabasho fiican, waxayna la kulmaan heerarka wax soo saarka cagaaran ee bilaashka ah iyo kuwa aan lahayn ee fumalin.
Hore: Sigaarka ilmaha
Xiga: Carruurta PU Raincoat
Bacda Hurdada ee Pu
Bacda Hurdada ee biyuhu
Bacda Hurdada ee Dabayl La'aanta Leh